Ukufakwa kokushisa okuyisisekelo-umgomo wokufudumeza okuphezulu okuphezulu
Izisekelo Zokupholisa Induction
Ukushisa ukushisa kwenzeka entweni eqhutshwa ngogesi (hhayi insimbi kazibuthe) lapho into ibekwa kunamandla kazibuthe ahlukahlukene. Ukufudumeza kokungenxa kungenxa yokulahleka kwe-hysteresis kanye ne-eddy-yamanje.
Ukushisa ukushisa inqubo yokushisa into eqhutshwa ngogesi (imvamisa iyinsimbi) ngokusingeniswa kwe-electromagnetic, ngokushisa okukhiqizwe entweni okwenziwa yimisinga eddy. I-heater engenisayo iqukethe i-electromagnet ne-oscillator kagesi edlulisa i-alternating frequency yamanje (AC) nge-elekthronoma. Amandla kazibuthe aguqukayo angena entweni, akhiqize imisinga kagesi ngaphakathi komqhubi, obizwa ngokuthi ama-eddy currents. Amasondo eddy agobhoza ukumelana nokushisa kokushisa okuphethwe yiJoule heating. Ezintweni ze-ferromagnetic (kanye ne-ferrimagnetic) ezinjenge-iron, ukushisa nakho kungahle kube khona ngokulahleka kukazibuthe we-hysteresis. Imvamisa yokusetshenziswa kwamanje kuncike ngosayizi wento, uhlobo lwezinto ezibonakalayo, ukuhlanganisa (phakathi kwekhoyili yomsebenzi nento okufanele ifudunyezwe) kanye nokujula kokungena.
Ukulahleka kwe-hysteresis kwenzeka kuphela ezintweni ezinamandla ezifana ne-steel, nickel, kanye nabanye abambalwa kakhulu. Ukulahleka kwe-hysteresis kusho ukuthi lokhu kubangelwa ukungezwani phakathi kwama-molecule lapho izinto zifakwe magnetized kuqala kwesinye isiqondiso, bese kuthi kwenye. Ama-molecule angase abhekwe njengezimboni ezincane ezizungezayo ngokushintshwa kwesinye isiqondiso somkhakha wamagnetic. Umsebenzi (amandla) kuyadingeka ukuwazungeza. Amandla aguqula ekushiseni. Izinga lokusetshenziswa kwamandla (amandla) landa ngokwanda kwezinga lokushintsha (imvamisa).
Ukulahlekelwa okwamanje kuka-Eddy kwenzeka kunoma yikuphi ukuqhuba okubonakalayo ensimini ehlukahlukene yamagnetic. Lokhu kubangelwa ukuhamba, ngisho noma izinto zingenazo izakhiwo zamagnetic ngokuvamile ezihambisana nensimbi nensimbi. Izibonelo zethusi, ithusi, i-aluminium, i-zirconium, insimbi engenasici engenamaphiko, ne-uranium. Amagundane e-Eddy angamasondo kagesi akhiqizwa isenzo se-transformer kule ndaba. Njengoba igama labo lisho ukuthi, zibonakala zigeleza zihamba nge-swirls ku-eddies ngaphakathi kwezinto eziningi eziqinile. Ukulahleka kuka-Eddy okwamanje kubaluleke kakhulu kunokulahlekelwa kwe-hysteresis ekushiseni kokufakelwa. Qaphela ukuthi ukushisa okufakelwayo kusetshenziselwa izinto ezingapheli, lapho kungekho ukulahleka kwe-hysteresis.
Ukushisa kwensimbi ukuqina, ukufaka, ukuqubuka, noma ezinye izinjongo ezidinga izinga lokushisa ngenhla lokushisa kwe-Curie, asikwazi ukuxhomeka ku-hysteresis. Insimbi ilahlekelwa izakhiwo zayo zamagnetic ngaphezu kwalokhu lokushisa. Lapho insimbi ishisa ngaphansi kwe-Curie iphuzu, umnikelo we-hysteresis uvame ukuba mncane kangangokuthi unganakwa. Kuzo zonke izinhloso ezingokoqobo, I2R emifudlana eddy yindlela kuphela lapho amandla kagesi angashintshwa khona ukushisa ngezinhloso zokushisa ukufakelwa.
Izinto ezimbili eziyisisekelo zokushisa okufakwe ngaphakathi:
Insimu evumayo yamagnetic
I-electrical conductive material efakwe ensimini yamagnetic
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi izisekelo zokufudumeza kokwenza, Ukushisa ukufakelwa, Izisekelo Zokupholisa Induction, Ukushiswa kwe-induction isimiso, ukufakwa kwe-induction yokushisa Imeyili kwemikhumbi
I-Magnetic Induction Heating Boiler